कोरोना कहरः लकडाउन मात्रै बिकल्प हो त सरकार ? – KhojPatrika
जनगुनासोप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार
कोरोना कहरः लकडाउन मात्रै बिकल्प हो त सरकार ?
By खोज पत्रिका	 June 2, 2020 0
काठमाडौं । बिश्वमा फैलिएको कोरोना चैत पहिलो साता नेपालमा पनि देखियो । एक जना त उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको सरकारले पत्तै दिएन । दोस्रो कोरोना संक्रमित भने भक्तपुरकी फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी एक किशोरीमा देखिएको पुष्टि भयो । दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारलले पहिलो पटक चैत ११ देखि १८ गतेसम्म लकडाउनको घोषना गर्यो । दोस्रो चरणमा चैत २५ सम्म बढाइयो । तेस्रो चरणमा चैत्र २६ देखि वैशाख ३ गतेसम्म पु¥याएको सरकारले चौथो चरणमा वैशाख १५ र पाँचौं चरणमा वैशाख २५ र छैटौं पटक जेठ ५ गतेसम्म थप्यो । सातौँ पटक थपेको लकडाउन जेठ २० गतेसम्म पुग्यो ।
पछिल्लो समय आठौं चरण अन्र्तगत सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ । तर, आठ औं चरणको लकडाउन थप्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजारको हाराहारीमा पुग्न थाल्यो । एकातिर कोरोना संक्रमित थपिदै जानु र अर्कोतिर लकडाउन उलंघन हुँदै जानुले कोरोनाको त्रास थप बढाएको छ । तर, सरकार लकडाउन एक मात्रै बिकल्प भएजस्तै गरी निरन्तर बजार ब्यवसाय ठप्प पार्दे लकडाउनको म्याद थपेको थपै छ । युरोपका अधिकांश देशहरुले जारी गरेको लकडाउन खुकुलो भइसकेको छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि लकडाउन मात्रै अन्तिम बिकल्प नभएको बताइसकेको छ । उसले सामाजिक दुरी कायम र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिने बताइसकेको छ ।
यतिबेला जारी लकडाउन पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बेला काठमाडौं उपत्यकामा भने लकडाउन ह्वात्तै उलंघन भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सडक हेर्दा लाग्छ लकडाउन खुकुलो त भएको होइन भन्ने दृश्य देखिएका छन् । तर, लकडाउन जारी नै छ । काठमाडौं उपत्यकामा निजी सवारी साधन र मोटरसाइकल मात्रै होइनन् सरकारी र संस्थानका सवारी साधन पनि बाक्लै गुडेका देखिन्छन् ।
औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले विदा दिने वा समय तालिका मिलाएर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, यतिबेला बिना तालिका पसलहरु खुलिरहेका छन् । लकडाउन अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दागर्दै पनि कतिपयले भने अटेरी गर्दै आएका छन् ।बिभिन्न बाहनामा सडकमा निष्किनेको कमी छैन् । लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरुलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी दिनहुँ पक्राउ गर्दै आएको छ । तर, लकडाउन उलंघन रोकिएको छैन् । ७१ दिनसम्म लकडाउनले घरमै बसेका सर्वसाधारण पनि हैरान भइसकेका छन् भने दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका मजदुरहरुको साँझ र बिहान चुल्हो समेत बल्न छोडेको छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्ने होइन भने भबिष्यमा झनै समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
क्वारेन्टाइनमा एक महिलाको मृत्यु, पीसीआर परीक्षणको तयारी